Akụkọ Bible: A Mụọ Jizọs n’Ụlọ Anụ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ị̀ MA onye nwa ọhụrụ a bụ? Ee, ọ bụ Jizọs. A mụrụ ya ọhụrụ n’ụlọ anụ. Meri na-enyiwe Jizọs n’ime ebe a na-edebere ịnyịnya na anụmanụ ndị ọzọ nri ka ha rie. Ma gịnị mere Meri na Josef ji soro anụmanụ ndị a nọrọ n’ebe a? Ebe a abụghị ebe e kwesịrị ịmụ nwa, ka ọ̀ bụ?
Ee e, ọ bụghị. Ma lee ihe mere ha ji nọrọ n’ebe a: Siza Ọgọstọs, bụ́ onye na-achị Rom, nyere iwu na mmadụ ọ bụla ga-ala n’obodo a mụrụ ya iji debanye aha ya n’akwụkwọ. Ọ bụ na Betlehem ebe a ka a mụrụ Josef. Ma mgbe ya na Meri rutere, ọ dịghị ebe ọ bụla ha hụrụ ụlọ. N’ihi ya, ha bịara n’ụlọ anụmanụ ebe a. Ọ bụkwa n’ụbọchị ahụ ka Meri mụrụ Jizọs! Ma, dị ka ị pụrụ ịhụ, ahụ́ dị ya mma.
Ị̀ na-ahụ ka ndị na-azụ atụrụ na-abịa ịhụ Jizọs? Ha nọrịị n’ọhịa n’abalị na-elekọta atụrụ ha, ìhè wee nwuo gburugburu ha. Ọ bụ otu mmụọ ozi! Egwu tụrụ ndị ọzụzụ atụrụ ahụ nke ukwuu. Ma mmụọ ozi ahụ sịrị ha: ‘Unu atụla egwu! Ana m ewetara unu ozi ọma. A mụwo Kraịst Onyenwe anyị taa n’ime Betlehem. Ọ ga-azọpụta ndị ya! Unu ga-ahụ ya ka a fụchiri ya ákwà nyiwe ya n’ụlọ anụ.’ Na mberede, ọtụtụ ndị mmụọ ozi bịara ma malite ito Chineke. Ya mere, n’egbughị oge, ndị ọzụzụ atụrụ ahụ jere ịchọ Jizọs, ugbu a kwa, ha achọtawo ya.
Ị̀ ma ihe mere Jizọs ji bụrụ onye pụrụ iche? Ị̀ ma onye ọ bụ n’ezie? Cheta na anyị kọrọ ihe banyere Ọkpara Chineke n’akụkọ mbụ dị n’akwụkwọ a. Ọkpara nke a so Jehova rụọ ọrụ n’ike eluigwe na ala na ihe niile ọzọ. Nke a bụ onye Jizọs bụ!
N’ezie, Jehova si n’eluigwe were ndụ Ọkpara ya tinye n’afọ Meri. Ngwa ngwa, nwa ahụ malitere ito n’ime afọ ya dị ka ụmụ ndị ọzọ na-eto n’ime afọ nne ha. Ma nwa a bụ Ọkpara Chineke. N’ikpeazụ, a mụrụ Jizọs n’ụlọ anụ ebe a na Betlehem. Ị̀ hụrụ ugbu a ihe mere ndị mmụọ ozi ji nwee obi ụtọ ịkọrọ ndị mmadụ na a mụwo Jizọs?
Ònye bụ nwa ọhụrụ a nọ na foto a, ebeekwa ka Meri na-achọ inyiwe ya?
Gịnị mere e ji mụọ Jizọs n’ụlọ anụ?
Na foto a, ole ndị bụ ndị ikom a na-abanye n’ụlọ anụ a, gịnịkwa ka mmụọ ozi gwara ha?
N’ihi gịnị ka Jizọs ji bụrụ onye pụrụ iche?
N’ihi gịnị ka a pụrụ iji kpọọ Jizọs Ọkpara Chineke?
Gụọ Luk 2:1-20.
Òkè dị aṅaa ka Siza Ọgọstọs keere n’imezu amụma banyere ọmụmụ Jizọs? (Luk 2:1-4; Maị. 5:2)
Olee ihe ga-eme ka a gụnye mmadụ n’etiti ndị ahụ a kpọrọ “ndị a nwapụtaworo”? (Luk 2:14; Mat. 16:24; Jọn 17:3; Ọrụ 3:19; Hib. 11:6)
Ọ bụrụ na ndị Judia ahụ nwere obi umeala, bụ́ ndị na-azụ atụrụ, nwere ihe mere ha ga-eji ṅụrịa ọṅụ n’ihi ọmụmụ nke Onye Nzọpụta, olee ihe ka ukwuu mere ndị ohu Chineke taa ga-eji ṅụrịa ọṅụ? (Luk 2:10, 11; Efe. 3:8, 9; Mkpu. 11:15; 14:6)
Gụọ ihe a ka ị chọpụta ihe mere ndị mmadụ ji agba Krismas n’abalị iri abụọ na ise n’ọnwa Disemba.